बिपन्न परिवार भन्छन् : ‘रोगले भन्दा भोकले मरिन्छ होला’ « Salyan Today
बिपन्न परिवार भन्छन् : ‘रोगले भन्दा भोकले मरिन्छ होला’
सल्यान १८, चैत्र ।
सल्यानको पश्चिमी क्षेत्रमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउदैँ आएका बिभिन्न परिवार मारमा परेका छन् । भौगोलिक रुपमा समेत बिकट मानिएको बन्गाड कुुपिण्डे नगरपालिकामा रहेका ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउदैँ आएका परिवार मारमा परेका हुन् । सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेपश्चात दैनिकी कामहरु बन्द भएकाले आर्थिक जोहो नहुदाँ समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ ।
सरकारले गरेको लकडाउनको पालना गर्नुपर्ने बताउदैँ ती बिपन्न परिवारले यस्तो अबस्थामा सरकारले राहतको ब्यबस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । यहाँका अधिंकास नागरिक विहान वेलुकाको छाक टार्न दिनभरि मजदुरी गर्नु पर्ने बाध्यता छ । तर दैनिक ज्यालादारी काम नहुनु र राजय पक्षबाट कुनै पनि राहतका कार्यक्रम सञ्चालन नहुदाँ दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको उनीहरुको भनाई छ ।
अहिले साँझ बिहानको छाक टार्न धौँ धौँ भएको बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका वडा नम्बर ५ का माघे बादीले बताउनुभयो । ज्यालादारी काम नभए पछि विहान वेलुका के खाने भन्ने समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारी पक्षबाट राहतको आसा गरेका विपन्न वर्ग रोग भन्दा छिट्टै भोकले मर्ने अवस्था आएको अर्का स्थानिय विसे वादीको भनाइ छ । वजारहरु पूर्ण रुपमा बन्द छ, फाट्टफुट्ट खुलेका पसलहरु पनि यतिबेला उधारो मा खाद्यान्न सामाग्री दिदैनन्, हामी के खाएर बाँच्ने ? उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानिय चिने वादीले अहिलेको अबस्थामा नगरपालिकाले लगाएतका सरोकारवाला निकायहरुले सहयोग गर्नेपर्ने बताउनुभयो । हामीलाई सहयोग कसैले गरेका छैनन्, दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ, घरमा भएको अन्नपात सकियो उहाँले भन्नुभयो अब कसरी बाँच्ने ? कुनै पनि निकायबाट सहयोग नपाउने हो भने झन् बिकराल अबस्था आउने उनीहरुको भनाई छ ।
जिल्लाको यस क्षेत्रमा करिब दुई दर्जन बढी वादी परिवारको बस्ती रहेको छ ।